» एकै परिवारका ५ जनामा कोरोना संक्रमण : घटेन महाबौद्धमा चहलपहल
एकै परिवारका ५ जनामा कोरोना संक्रमण : घटेन महाबौद्धमा चहलपहल
१२ श्रावण २०७७, सोमबार १५:३३
मकवानपुर । काठमाडौंको महाबौद्धका एकै परिवारका पाँचजनामा कोरोना संक्रमण देखिए पनि त्यहाँ मानिसको चहलपहलमा कुनै कमी आएको छैन । बौद्ध क्षेत्रमै कपडाको व्यापार गर्ने एकै परिवारका पाँचजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
जसमा बिहीबार परिवारका दुई सदस्य (दिदी र भाइ) मा कोरोना पुष्टि भएको थियो भने अन्य तीन सदस्य (आमा, बुबा र नातिनी) मा आइतबार पुष्टि भएको थियो । स्थानीयले भने संक्रमितले सञ्चालन गरेको पसल र घरदेखि सय मिटरवरपरका व्यक्तिको नमुना संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गर्न माग गरेका छन् । कोरोना संक्रमित भेटिएको पाँच दिन बित्दा पनि सरकारी निकायका टोली परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्न नआएको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीय अमीत तुलाधरले सरकारले कोरोना संक्रमितले सञ्चालन गरेको पसल र घर सिल गरेर छिटोभन्दा छिटो परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । सधैं भीड हुने स्थानमा कोरोना संक्रमित भेटिँदा पनि सरकारले हेलचेक्रयाइँ गर्दा संक्रमण दर फैलन जोखिम बढेको उनको गुनासो थियो ।
“आज मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाको टिम आएर सर्भे गरेर गएको छ नाम पठाउनुभनेको थियो तर अझै भोलि मात्र पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्न आउने भनेको छ,” उनले भने, “हामीहरू मिलेर सय मिटरवरपरको पसल बन्द गरेका छौं ।”
शुुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले दिदी र भाइलाई गत बिहीबारै कोरोना पुष्टि भएर भर्ना भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आमा, बुबा र (बिहीबार भर्ना भएकी छोरीको छोरी) नातिनीमा कोरोना पुष्टि भएर भर्ना भएका जानकारी दिए । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोना संक्रमण भिडमा सर्ने जोखिम बढी हुने भएकाले त्यस्तो स्थानमा नजान सुझाएका छन् ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले धेरै मानिस भेला भएको स्थानमा कोरोना संक्रमण सजिलै फैलने खतरा हुने जानकारी दिए । उनले भने, “विनाकाम घर बाहिर नजाने, जानै परे राम्रोसँग मास्क लगाउने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र पटक–पटक हात धुनुपर्छ ।”